Quake3 - ဒီ FPS ဂိမ်းကိုဘယ်လို GNU / Linux မှာတပ်ဆင်ပြီးသုံးရမလဲ။ | Linux မှ
ငလျင် (၃) - ဤ FPS ဂိမ်းကိုမည်သို့ GNU / Linux တွင်တပ်ဆင်။ အသုံးပြုမည်နည်း။
ဒီ post မှာဒီနေ့ပြောမယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်၏အလွဂိမ်း, ငါတို့အံ့သြစရာများနှင့်ကြီးထွားလာမှ add ပါလိမ့်မယ် ဂိမ်းစာရင်း del အမျိုးအစား FPS (လူကိုယ်တိုင်သေနတ်သမား)။ ဤရွေ့ကား, အဟောင်းနှင့်ကမ္ဘာလူသိများသည်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ် ငလျင် 3.
ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ခလုတ်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၏အငယ်ဆုံးနှင့် / သို့မဟုတ်လျော့နည်းသောဝါသနာရှင်များအတွက်မူ၎င်းကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။ ငလျင်3o ငလျင် III Arena ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် ငလျင်များ အဘယ်သူ၏အာရုံအပေါ်ဗဟိုပြုခဲ့သည်ဖန်တီးခဲ့သည် multiplayer modeနှင့်ပေါ်မှာဖြန့်ချိခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလ21999 ကုမ္ပဏီအားဖြင့် Bethesda.
ငါလက်ျာဘက်အပေါ်ခုန်မီ ငလျင် 3ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသော၊ ရှည်လျား။ ကြီးထွားမှု၊ ဂိမ်းစာရင်း del အမျိုးအစား FPS (လူကိုယ်တိုင်သေနတ်သမား) ကစားရန်ရရှိနိုင် GNU / Linux များ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမှလင့်များမှ:
ရန်သူနယ်မြေ - အမွေ
ရန်သူနယ်မြေ - ငလျင်စစ်ပွဲများ
Wolfenstein - ရန်သူနယ်မြေ
1 ငလျင် (၃): ကစားရကျိုးနပ်သည့်ဂန္ထဝင် FPS ဂိမ်း
1.1 ငလျင် (၃) ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 အဲဒါကို GNU / Linux ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်း
1.2.1 Mode 1: ငလျင်လှုပ်ခြင်း3ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
1.2.2 Mode 2: IOQuake3ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ငလျင် (၃): ကစားရကျိုးနပ်သည့်ဂန္ထဝင် FPS ဂိမ်း
ငလျင် (၃) ဆိုတာဘာလဲ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငလျင်3တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယိုဂိမ်း FPS လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ၏၎င်း၏ထက်ပို 20 ကျော် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဂိမ်းအောက်တွင်ဆက်လက်မြှင့်တင်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောဖော်ပြချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
"အထက်တန်းလွှာစစ်သည်တော်များ mush အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသော Arena သို့ကြိုဆိုပါ။ ဘုံသဘောသဘာဝ၏အရိပ်အမြွက်နှင့်သံသယတစုံတရာကိုစွန့်လွှတ်ပြီးလျှင်သင်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများနှင့်အမှောင်ထုတွင်းနက်ထဲသို့ဝင်သွားသည်။ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သည်သင့်အားချော်ရည်တွင်းများနှင့်လေထုအန္တရာယ်များဖြင့်ကြိုဆိုသည်။ ရန်သူများများကဝိုင်းရံထားသဖြင့်သင့်အားဤအရပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်စေသည်။ သင်၏အသစ်ဂါထာ - တိုက်ခိုက်သို့မဟုတ်သေပါ။"
ထို့အပြင်ဤထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ရှုပြီးပါက၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ကစားရန်လှုံ့ဆော်သူများအတွက်ဂိမ်း၏အနည်းဆုံးလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုသိရှိထားသင့်သည်။ ငလျင် (၃) အတွက်တရားဝင် Steam ဆိုဒ် အောက်ပါ:
"8G MB ဂရပ်ဖစ်ကဒ် 3D အရှိန်နှင့် OpenGL အထောက်အပံ့အပြည့်အစုံပါရှိသည်။ Pentium® MMX 233 MHz သို့မဟုတ် Pentium II ပရိုဆက်ဆာ 266 MHz သို့မဟုတ်AMD®K6®-2 MHz 350 MB တွင်4MB ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၊ 64 MB RAM၊ 100% Windows® XP / Vista နှင့်ကိုက်ညီသည့်ကွန်ပျူတာ (ဗီဒီယိုကဒ်အတွက် ၃၂-bit drivers၊ အသံကဒ်အတွက်အချက်အလက်များနှင့်ထည့်သွင်းထားသောကိရိယာများအတွက်)၊ ဂိမ်းဖိုင်များအတွက် hard disk ပေါ်တွင် ၂၅ MB မဖြန့်ထားသောနေရာလွတ် (အနည်းဆုံးတပ်ဆင်ခြင်း) နှင့် ၄၅ MB Windows paging ဖိုင်အတွက် 32% DirectX 25 နှင့်လိုက်ဖက်သောအသံကဒ်၊ ၁၀၀% မိုက်ခရိုဆော့နှင့်လိုက်ဖက်သောကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်၊ ဂျွိုက်စ် (ရွေးချယ်စရာ) ။"
အဲဒါကို GNU / Linux ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်း
Mode 1: ငလျင်လှုပ်ခြင်း3ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း jugar «Quake 3» GNU / Linux ပေါ်မှာ အောက်ပါ execute ရန်ဖြစ်ပါသည် command ကိုပညတ်တော်တို့ကို ထဲမှာ root terminal (console):
ထို့နောက်ဂိမ်းကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မည် «/usr/lib/quake3/» နှင့်ဂိမ်း command ကိုကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်ကစားနိုင်ပါတယ် «quake3» terminal ကိုပါ။
Mode 2: IOQuake3ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ရွေးချယ်စရာနှင့်အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်း GNU / Linux ပေါ်မှာ Quake3ကိုဖွင့်ပါ ထည့်သွင်းနေပါတယ် «IOQuake 3»၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်မြင်ရန် «Mods»။ ဤသို့ပြုရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် command ကိုပညတ်တော်တို့ကို ထဲမှာ root terminal (console):
ထိုအခါသင်သည်အနည်းဆုံးခေါ်ဖိုင်ကိုရသင့်ပါတယ် «pak0.pk3» ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ, ကတည်းကအတွက် ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် «IOQuake 3»မဟုတ်ပါ «archivos instaladores .run»မ «archivos extras .pk3» (Patch Data / Patch)၊ အခြားသူများအကြားအောက်ပါလမ်းကြောင်းတွင်ကူးယူရမည်။
ရရှိသည်နှင့်ကူးယူပြီးပါက၎င်းသည်အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင်အောက်ဖော်ပြပါဖိုင်များကိုကျေနပ်လောက်အောင်အသုံးပြုပါ link ကို။ ထို့အပြင်၊ ဒီဂိမ်းမုဒ်အတွက်၊ CD Key ထည့်ရန်သတင်းစကားနေရာချရန်မလိုအပ်ပါ။ လိုအပ်သောအရှည်၏မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမဆို၊ ငါ့အမှု၌, ငါသည်အောက်ပါကျပန်း sequence ကိုဝင်ကြ၏ «l2lth23ta3pcp7lp» ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ပြaနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဂိမ်းကိုကစားရုံနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်မှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကိုချစ်သောသူ FPS ဂိမ်း သင်၏ပျော်မွေ့နိုင်သည် အခမဲ့အွန်လိုင်းဗားရှင်း ခေါ်ဆိုခ ငလျင်ချန်ပီယံလိဂ်, ပေါ်မှာကစားရန် Steam ကိုအသုံးပြု GNU / Linux များ။ ဒီအကြောင်းကိုပိုသိချင်တဲ့သူတွေကတော့aကိုနှိပ်ပါ ပန်ကာဝဘ် ၎င်း။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" တစ် ဦး အကြောင်းကို FPS ဂိမ်းများ ဟုခေါ်တွင်သမိုင်း၌အကျော်ကြားဆုံးဂန္ «Quake3»အရာယခုငါတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် «Linux အတွက်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဇာတိ FPS ဂိမ်းများစာရင်း»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Quake3 - ဒီ FPS ဂိမ်းကိုဘယ်လို GNU / Linux မှာတပ်ဆင်ပြီးသုံးရမလဲ။
AOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Apple Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁